Wararka Maanta: Arbaco, May 4 , 2022-Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo si adag u cambaareeyay weerarkii Ceelbaraf
Qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha Dibadda dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si weyn ugu xun tahay weerarkii shalay ka dhacay Ceelbaraf, islamarkaana ay uga tacsiyadeyneyso shacabka iyo dowladda Burundi waxyeeladii kasoo gaartay ciidankooda weerarka cuslaa ee Shalay subaxnimadii hore ka dhacay Saldhiga deegaan Ceelbaraf.
Warsaxafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay beesha Caalamka kaga dalbatay inay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS.
Dhanka kale guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa dhankiisa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyay weerarkii Al-shabaab ku qaadeen Saldhiga ciidanka Burundi ee deegaanka Ceelbaraf oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Sh/dhexe.
Guddoomiye Moussa Faki ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu si adag u cambaareynayo weerarka ka dhacay Ceelbaraf oo uu tilmaamay ineysan marnaba hoos u dhigi doonin dagaalka ciidamada ATMIS ay kula jiraan Al-shabaab.
Cambaareynta dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika ee weerarkii Ceelbaraf ayaa imaaneysa xili Al-shabaab ay si rasmi ah u sheegatay iney saacado badan gacanta ku hayeen Saldhigii Ciidanka Burundi ee deegaanka Ceelbaraf, islamarkaana ay ku dileen 173 askari oo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS, gaar ahaan kuwa dalka Burundi.
Weerarkii Shalay Al-shabaab ku qaadeen deegaanka Ceelbaraf oo ay sheegteen iney ku dileen 173 askari oo Burundeys ah ayaa noqonaya weerarkii labaad ee ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan, waxaana weerarkii koowaad uu ahaa kii ka dhacay deegaanka Ceelcadde sanadkii 2016-kii oo ay Al-shabaab ku dileen 190 askari oo ka tirsana ciidamada dowladda Kenya, islamarkaana ay nolosha ku qabteen 11 askari oo Kenyaan ahaa.